UYesu Ukhawuleza Isiqhwithi (Marko 4: 35-40) - Uhlalutyo
35 Ngaloo mini, ngokuhlwa, wathi kubo, Masiwele ngaphesheya. 36 Bathi bewushiye isihlwele, bamthabatha, njengokuba wayesemkhombeni. Kwaye kwakukho kunye nezinye iinqanawa ezincinane. 37 Kwaye kwavela isiqhwithi esikhulu somoya, namagagasi awabethela emkhombeni, kangangokuba ngoku sele izele. 38 Wayehlala engxenyeni encinci yomkhumbi, elele emkhombeni; bamvusa, bathi kuye, Mfundisi, awuyi kuqaphela ukuba sitshabalale?
39 Wavuka, wamkhuza umoya, wathi elwandle, "Holo, thula." Yaye umoya waphela, kwaba nokuthula okukhulu. 40 Wathi kubo, Yini na ukuba niyike kangaka? njani na ukuba ningenalo ukholo? Baye besoyika ngokukrakra, bathi omnye komnye, Ngubani na lo mntu, ukuba nomoya nolwandle ziyamthobela?
Thelekisa : Mateyu 13: 34,35; Mateyu 8: 23-27; Luka 8: 22-25
Amandla kaYesu phezu kweNdalo
"Ulwandle" luwela ngoYesu kunye nabalandeli bakhe uLwandle lwaseGalili , ngoko ke indawo abaya kuyo iya kuba yiYordan. Oku kuya kumthabatha kwintsimi elawulwa yiNtlanga, ekubhekiselele kwandisa ukwanda kwesigidimi sikaYesu kunye noluntu olungaphezu kwamaYuda nakwihlabathi leentlanga.
Ngexesha lokuhamba ngaphesheya kweLwandle laseGalili, isiqhwithi esikhulu sikhupha - sikhulu kangangokuba isikebhe sisongela ukucima emva kokungena kwamanzi amaninzi. Indlela uYesu akwazi ngayo ukulala, nangona oku kungaziwa, kodwa iingcamango zendabuko kwiphepha lithetha ukuba walala ngobomvu ukuze ahlole ukholo lwabapostile.
Ukuba ngaba kunjalo, ke bahluleka, kuba babesaba kakhulu ukuba bamvusa uYesu ukuze bafumanise ukuba wayekhathalele ukuba bonke badibana.
Ingcaciso ecacileyo ngakumbi kukuba umbhali kaMarko ulele uYesu ekuphumeni kwezinto ezifunekayo: Ukuthoba kukaYesu isiphepho senzelwe ukukhupha ibali likaYona.
Lapha uYesu ulele ngenxa yokuba ibali likaYona liye lalala phantsi emkhombeni. Ukwamkela loo nkcazo, nangona kunjalo, kufuna ukuvuma ingcamango yokuba eli bali ibonakaliso lombhalo ngumbhali kwaye akuyiyo ingxelo echanileyo yembali.
UYesu uya kuphelisa isivunguvungu aze abuyisele ulwandle ukuze luzolile - kodwa kutheni? Ukuqhaqhazela isithwathwa akubonakali kuyimfuneko kuba emele abanye ngenxa yokungabi nokholo-mhlawumbi, bafanele bathembele ukuba akukho nto iya kwenzeka kubo xa ejikelezile. Ngoko ke, ngokuqinisekileyo, ukuba akazange avimbe isiqhwithi babeza kuba benza ngokugqithiseleyo.
Ingaba injongo yakhe yenzeke nje ukudala ukubonakaliswa kwamandla aphumeleyo ukuze ivakalise aba postile? Ukuba kunjalo, waphumelela ngenxa yokuba babonakala besaba nje ngoku njengamaxesha adlulileyo. Kuyamangalisa, nokuba kunjalo, abaqondi ukuba ngubani. Kutheni bavusa ngisho nokuba babengacingi ukuba unokukwazi ukwenza into?
Nangona kusekuqaleni kobulungiseleli bakhe, uye wabachazela zonke iimfihlelo eziyimfihlo zemizekeliso yakhe. Ngaba abazange baveze ukuba ngubani yena kunye noko akwenzayo? Okanye ukuba bekunjalo, ngaba bayamkholwa nje? Kungakhathaliseki ukuba kunjalo, oku kubonakala kukunye umzekelo wabapostile abonakaliswa njengeedonti.
Ukubuyela kwakhona kwiingxelo zenkcubeko kweli nqaku, abaninzi bathi leli bali limele lisifundise ukuba singabesabi ulwalamano nolwaphulo-mthetho olusijikelezayo. Okokuqala, ukuba sinokholo, akukho mmazamo ukuza kuthi. Okwesibini, ukuba usebenza njengoYesu kwaye umane ulawule ukuxhalabisa "ukuba uhlale," ngoko uya kufezekisa ingqondo engaphakathi kwaye uxhomekeke kakhulu ngento eyenzekayo.
Ukuthotywa kwesiphango esivuthayo kufana namanye amabali apho amandla kaYesu abonakaliswa nxamnye neentlanzi, kunye nemikhosi engqungquthela: ukugubha ulwandle, iidemon kunye nokufa ngokwawo. Ukuzigcina ulwandle ngokwawo kuboniswe kwiGenesis njengento ebalulekileyo yamandla kunye nelungelo. Akunjalo ngokungathandabuzekiyo ukuba amabali alandelayo kaYesu aquka amanye amanyathelo okulwa nemikhosi enamandla kunezinto eziye zabonwa kwangoku.
Iiminyaniso zeBhayibhile ekubizeni ubulungiseleli
Ukufaka iiGems ezivela kwiGit
Ukubhala ii-Greek letters kwi-Computer
Iprofayili yeSondlo seHindu uGoswami Tulsidas (1532 ukuya ku-1623)
I-Redfish Bait epheleleyo
I-Greek Eros kunye neFilia Love Magic